प्रधानमन्त्री केपि ओलिको राजिनामा माग आएसंगै परदेशबाट यी युवाको आ-क्रोश – नेकपामा यस्तो को छ अर्को ब्यक्ती जो भारतसंग मुकाबला गर्न सक्छ ?? – Butwal Sandesh
प्रधानमन्त्री केपि ओलिको राजिनामा माग आएसंगै परदेशबाट यी युवाको आ-क्रोश – नेकपामा यस्तो को छ अर्को ब्यक्ती जो भारतसंग मुकाबला गर्न सक्छ ??
प्रधानमन्त्री केपि ओलिको राजिनामाको माग नेकपा कै उच्च स्तरबाट आएको भन्ने खबर बाहिरिए संगै सामाजिक सन्जालमा जायज र न जायज भन्ने कमेन्टहरु आउन थालेका छन । मैले यहाँ एउटा देश भक्ती परदेशीले लेख्नु भएको लेखलाई हु बहु प्रस्तुत गरेको छु । पढेर प्रतिक्रिया दिनु होला ।
– जन अपेक्षा अनुसार सबै नै काम कुनै सरकारले गरेको इतिहास छैन र त्यस्तो हुदैन पनि। एकातिर गर्यो अर्को रिसाउने, अर्कोतिर गर्यो फेरि अर्को चिच्याउने।काम गर्ने क्रममा केहि गल्ति हुन्छन त्यो स्विकार गरि सच्चिनु पर्छ। तर अहिले सत्ताधारी पार्टिकै सिर्स नेताहरु केपिकोको राजिनामा मागिरहेकाछन, यदि सत्ता परिवर्तन नै गर्ने भए नि आस बोकेको अनुहार कुनै छैनन्।
त्यो भन्दा ठुलो कुरा त के हो भने सिमानाको बिषय हो। र यै बिषयको कारणले के पि बाले भने जस्तै भारतकै खेलमा यो राजिनामाको कुरा आएको हो भने त्यो भन्दा ठुलो बिडम्बना हाम्रो लागि के हुन सक्छ र! अझ भनौ केपिको सरकार ढालेर अरु जो कोहि आउ म सिमानाको मु-द्दा मिलाइदिन्छु नै भनेर भारतले भने पनि यो कदापि गर्न हुन्न। अब त भारतसङ्गका थुप्रै असहमतिलाई वार कि पार गर्ने बेला भएकोछ।
यो बेला उसैको इशारामा सत्ता परिवर्तन गरेर भारतसङ्गको समस्या समाधान गर्ने बारे नेता ज्युहरु सोच्नुहुन्छ भने यो भन्दा बिडम्बना सायदै इतिहासमा नहोला। पार्टि भित्र वा सरकार भित्र भएका मतभिन्नतालाइ फेरि एक पटक एक एक कदम पछि सरेर भएनि मिलाएर लाने पो होकि। भारतको हरेक चाल नबुझि प्रमको राजिनामा नै समाधन होला र? जनतामा देश प्रति अझ माया पलाएको यो मौकामा हामी सबै एकै ठाउमा रहि साच्चि नै नेपाललाइ स्वनिर्णय सार्बभौम राष्ट्र हो भनेर बिस्वलाई किन नचिनाउने।कि अझै भारत जस्तो बिस्तारबादिको गोटिमा खेलिरहने त! ? #Go back India – बलराम थम्फराको फेसबुक वालबाट ।